ရမက်ထန်တဲ့ခင်ထားငယ် – Grab Love Story
ပေါင်တန်ကိုထမ်းတင်ထားသေါကြောင့် ခင်ထားငယ်၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ခုသည် ပြော့ပြော့ အိအိ ပုံ့ပုံ့ ကြီးဖြစ်နေသည်။ မင်းဇော်သည် ခင်ထားငယ်၏ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကိုလက်ဝါး တစ်ခု စီဖြင့် အုပ်ကာ ခပ်တင်း တင်းကိုင်လိုက်သည်။ ထိုသို့ကိုင်ရာတွင် လက်ချောင်းများကို ဖင်သားနှစ်ခုအလယ်ရှိ အကွဲကြောင်းကို ကျကျနန ကိုင်မိစေရန် ပြုသည်။ ဖင်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်သောအခါဖင်အကွဲကြောင်းကို ဆွဲဖြဲ သလို ဖြစ်သွားသည်။ လက်ညှိး နှစ်ချောင်းက စအိုနှင့်လက်နှစ်လုံးသာသာခန့် ဝေးသော နေရာတွင်ရှိသည်။ မင်းဇော်က ထိုလက်ညှိးများတွင်ဖိအားကို ပိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် စအိုဝလေးကိုမပြဲတပြဲ ဆွဲဖြဲ နေသည့် သဘောမျိုးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လီးကို အသာဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက် ညှောင့်လိုးလေး လိုးပေးလိုက်သည် . .. လီးကြီးက တိုးဝင်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက် ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ အဖုတ်ထဲမှစောက်ရေမှာအပြင်သို့ လျှံ ထွက်ခါ ဖင်ခေါင်းတလျှောက် အောက်သို့ စီးကျသည်။ စီးကျလာသောစောက်ရေကြည်တို့သည် စအိုဝလေးကို ဖြတ်၍သွားရာ စအိုဝလေးမှာ အေးကနဲ နွေးကနဲဖြင့်ယားကျိကျိဖြစ်လာသည်။ ခင်ထားငယ်၏ ဖင်ပေါက်မှာ အရိုင်းမဟုတ်..ဖင်အပျိုမဟုတ်..ပယ်ပယ်နယ်နယ် အလိုးခံ ထားရသော ဖင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ သည်လိုစိုစို စွတ်စွတ်ဖြစ်လာသောအခါ ယားသလိုလိုနှင့် မရိ်ုးမရွ ဖြစ်လာသည်။ ဖင်ခံခြင်သော စိတ်များတဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဤအချိန်မှာပင် မင်းဇော်သည် စောက်ရေကြည်များစီးကာ စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေသောခင်ထားငယ်၏ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ သူ၏ညာလက် ခလယ်ကို ဆတ်ကနဲသွင်းလိုက်သည်။ ““ စွတ်..”” ““ အိုး..မာမီ..”” မင်းဇော်ကလည်း စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးသွင်းရာတွင် ညှင်သာသလောက်၊ ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲ လက်ထိုး သွင်းရာတွင်တော့ အတော်ကြမ်းသည်။ လက်ခလယ်တစ်ချောင်းလုံးကို တစ်ချက်ထည်းနှင့် အဆုံးဝင်အောင် တအားထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လီးချောင်းကြီးများ တအားထိုးသွင်းကာ လိုးတာကိုပင်ခံဖူးပြီးသော ဖင်ခေါင်းပေါက်ဖြစ်သည့်အတွက် လက်ခလယ်ကိုတော့ အရေးမလုပ်ပါ၊ ထိုးထဲ့လိုက်ရာတွင် လျှောကနဲဝင်သွားသည်။ သို့သော် မင်းဇော်က လက်ခလယ်ကို သည်အတိုင်းအဖြောင့်ထိုးသွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ.. ခပ်ကောက် ကောက်လေး ပြုကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည့်အတွက် အထိအတွေ့ကတော့ တမူထူးသည်။ ဆန်းသည် ..ကောင်းတာလဲကောင်းသည်။ ဖင်လိုးတာကိုခံဖူးသော ခင်ထားငယ်မှာ ( သူမသည် ဖင်လိုးတာကို ခံဘူးယုံသာမက ဖင်ပေါက် စေါက်ဖုတ် ပါးစပ်ပေါက်တို့တွင် လီးသုံးချောင်းတစ်ပြိုင်ထဲ ထိုးသွင်းလိုးတာကိုခံဘူးသည်။) ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲသို့ လက်ချောင်း ထိုးသွင်းတာ ခံရယုံမျှနှင့်ရင်ထဲဖိုမောလှိုက်သွားရသည်။မင်းဇော်သည် ကာမမှု၌တစ်ကယ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်းကို ခင်ထားငယ်ဝန်ခံပါသည်။ မင်းဇော်သည် ခင်ထားငယ်ကို စတင်၍ဆောင့်လိုးပါလေတော့သည်။
ထိုသို့လိုးရာတွင် စေါက်ဖုတ်ထဲရှိ လီးနှင့် ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးသွင်းထားသော လက်ခလယ်တို့ကို အချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားပေးသည်။ စောက်ဖုတ်ကို လီးဖြင့်လိုးကာ ဖင်ပေါက်ကိုလက်ခလယ်ဖြင့် လိုးခြင်း ဖြစ်သည်။သည်လို လီးနှင့်လက်ခလယ် ပြိုင်တူလိုလို လိုးခြင်းသည် ခင်ထားငယ်ကို အပြတ်ခိုက်သွား စေသည်။ ခင်ထားငယ်၏ တစ်ကိုယ်လုံး လူးလူး လွန့်လွန့် ဖြစ်နေလေတော့သည်။ မင်းဇော်သည် တစ်ချင်ခြင်းမှန်မှန်ဆောင့်သည် ထိုဆောင့်ချက်တိုင်းတွင် အားအပြည့်ပါလျက် လီးအ၀င် နက်ကာ ထိမိလှပေသောကြောင့် တစ်ချက်ဆို ဆိုသလောက်ခင်ထားငယ်တစ်ယောက် ကော့ပျံသွားလေသည်၊ စအိုပေါက်ထဲသို့ လည်း လက်ခလယ်ကိုအဆုံးသွင်းလိုက် ကျွတ်လုလု ဆွဲထုတ်လိုက် အားဖြင့် ဆပ်ကနဲပြန် ဆောင့်ထိုးလိုက်လုပ်ပေးသည်။ ““ ဘွတ်..ချစ် ..ဘွတ်..အင့် ““ ““ ဘွတ်..ဘွတ်..စွပ်..ဗျစ်.ပြွတ် ”” ““ အား ..အောင်မယ်လေး ကောင်းလိုက်တာရှင် ””ခင်ထားငယ် ရမက်ပြင်းလာသည် သူမသည် ရမက်စိတ်ပြင်းထန်ပြီိး နှာထလာလျင်ရင်သားအစုံကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲကာ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးတာကို အရမ်းခံချင်သည်။
ယခုမင်းဇော် ၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ဖင်ကို လိုးဆော်နေပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ကတော့ဘေးနားကိုထောက်ကာ အားပြုထားရပေရာ နို့ကိုဆွဲရန်လက်အပိုမရှိဘဲဖြစ်နေသည်။ နို့အုံနှစ်ခုကို စုံကိုင်ကာဆွဲနိုင်ရန် ဖင်ပေါက်ကိုလိုးနေသည့်လက်ခလယ်ကိုလွှတ်ရ ပေမည်။ ထိုသို့လက်ခလယ်ဖြင့် ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးကာလိုးပေးနေသည်ကလည်း ခံလို့ကောင်းလှပေရာ ထိုအရသာကိုလည်း မပျက်စေလို..၊ထောက်ကာ အားပြုထားသော လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ရင်သားနှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ ဆုပ်နယ် ပေးခိုင်း လျင် ကောင်းမည်လားဟု စဉ်းစားမိသေးသည်။ သို့ရာတွင် ဤသို့လုပ်ပါကအားပြုထောက် ထားမှုပျက်ကာ ဆောင့်ချက်အားလျော့ပြီး လီးအ၀င် သိတ်မနက်ရှိုင်းမထိရောက်တော့ဘဲ အရသာ ပျက်သွားမှာ ကို ခင်ထားငယ်ရိပ်စားမိသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ခင်ထားငယ်သည် မိမိ၏နို့အုံကြီးနှစ်ခုကို မိမိလက်များဖြင့် ပြန်၍တအားဆုပ်နယ်ကာ တဟင်း ဟင်းဖြင့် ဖီလင်တွေ အပြတ်တက်နေသည်။ မျက်လုံးပင်ကောင်းစွာ မဖွင့်နိုင်တော့ပေ..။ ဒါကိုမြင်ရတော့ မင်းဇော်မှာလည်း တမျိုးတစ်ဖုံစိတ်ပို၍လှုပ်ရှားလာသည်။
ထို့ကြောင့် ဆောင့်ချက်များကို မြန်ပေးလိုက်သည်။တစ်ချင်ခြင်းမှန်မှန်ဆောင့်လိုးမနေတော့ ၊ ဆက်တိုက် စက်သေနတ်ပစ်သည့်နယ်တရကြမ်းဆောင့်လိုးသည်။ လက်ခလယ်ကိုလည်း ဖင်ပေါက် ထဲသို့ မြန်ဆန်စွာထိုးသွင်းပြန်ထုတ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်သည်။လီးနှင့်လက်ချောင်းထိုးသွင်းလိုက်တိုင်းသည်၊ လိုးနေသူမင်းဇော်နှင့် အလိုးခံနေသူခင်ထားငယ်တို့ နှစ်ယောက်လုံး၏ သွေးသားများ ဆူဝေလာသည်။ မင်းဇော်က လီးနှင့်လက်ခလယ် တို့ကို အားအင်အပြည့်ဖြင့် ထိုးဆောင့်ဖိသွင်းလိုက်လေတိုင်း ခင်ထားငယ်သည် ။စေါက်ဖုတ်နှင့် ဖင်ခေါင်းထဲသို့ဝင်လာသည့် လီးတန်နှင့် လက်ချောင်းတို့ကို ဆီး၍ဆီး၍ ညှပ်ပေးညှစ်ပေး စုပ်ယူ ပေးနေသည်။ စေါက်ဖုတ်အတွင်းသားနှင့် ဖင်ခေါင်း ကြွက်သားများကိုကောင်းကောင်းကြီး အလုပ် ပေး နေသည်။ မင်းဇော်က ပို၍ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးသည်။ ပိ်ု၍ကြမ်းကြမ်း လိုးသည်ညှောင့်သည်..ခင်ထားငယ်ကလည်း မင်းဇော်၏ လိုးချက်ဆောင့်ချက်များနှင့်အပြိုင် ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကာ ပင့်ကာ ခါးကလေးနွဲ့ကာ ယမ်းကာနှင့် အပြတ်ကိုခံယူသည် အောက်ပေးကောင်းကောင်းပေးည် စေါက်ရေတွေကလည်း စိုရွှဲနေပြီမို့ အသံများက တဘွတ်ဘွတ်မြည်နေသည်။
ခင်ထားငယ်သည် ကောင်းလွန်းလှသည်ဖြစ်ရာ ပါးစပ်မှ ““ အား..အား.. ဟင့်..မြန်မြန်နဲ့ ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးပေးပါ ..ဆောင့်ဆောင့် …အား..”” ခင်ထားငယ်က အာသာငန်းငန်းပင်တောင်းဆိုသည် ပြောဆိုပုံသည် အငမ်းမရဖြစ်သော်လည်း ရမက်ဇော ဟုန်အလွန်အမင်းထက်သန်နေသည်မို့ စကားသံကတော့တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်ဖြစ်နေသည်။ မင်းဇော်မှာလည်း လရေကပန်းခါနီးပြီမို့ အရမ်းကိုဆောင့်လိုးနေသည်။ မင်းဇော် ကိုယ်တိုင် လည်း မိမိနည်းတူ ကာမအရသာကိုခံစားနေရကြောင်း ခင်ထားငယ်က သိရှိနေလေသည်။ သည်လိုသာဆိုပါကမိမိတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်တူပြီးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းခင်ထား ငယ်က ရိပ်မိကာ ၀မ်းသာကျေနပ်လျက်ရှိသည်။ခင်ထားငယ်အဖို့ ကာမစပ်ရှက်ခြင်းသည် ( စေါက်ဖုတ် ၊ ဖင်၊ ပါးစပ်၊ နို့အုံကြား ) ဘာမျှမဆန်းပါ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ ကာမစိတ် အရမ်းကိုတက်ကြွကာ အငမ်းမရဖြစ်နေတာမျိုး၊အရသာထူးကဲကာ ဇိမ်ရှိတာ မျိုး မကြုံဘူးပါ။ ယခုလည်း ကာမမရသာ၏အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ကာ ပြီးတော့မည်မို့ ခင်ထားငယ် တစ်ကိုယ်လုံးရှိကြွက်သားများ အကြောအချင်များသည် တင်းကြွလာသည် စေါက်ဖုတ်ထဲမှလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်တက်နေသည်။ ““ အာ.အား..ဟား.. အီး…ထွက်ကုန်ပြီ.ကိုဇော်ရေ..ကောင်းလိုက်တာရှင် အောင်မယ်လေး. ကောင်းလိုက်တာ..”” ခင်ထားငယ်က ပါးစပ်မှ ရေရွတ်မြည်တမ်းရင်းထွန့်ထွန့် လူးလျက် ကော့ပျံနေသည်။ သူမ ၏စောက်ဖုတ်တွင်းမှ စီးထွက်လာသောစေါက်ဖုတ်အရေများကလည်း မင်းဇော်၏ လီးတန်ကြီးကို ပူနွေးသွားစေသည်။ စေါက်ဖုတ်၏ အတွင်းသားများကိုလည်း စူပွ စူပွလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်လီးတန်ကြီးကိုဖြစ်ညှစ်နေသလို ဖင်ခေါင်း သည်လည်း တာဝန်ကျေစွာ ရှုံ့လိုက်ပွလိုက်ဖြင့်လက်ခလယ်ကို စုပ်ယူလျက်ရှိသည်။ မင်းဇော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရမ်းကို စိတ်ထနေသည့်အပြင် ခင်ထား၏ စောက်ဖုတ်ညှစ်အား မှာလည်း ကောင်းလှသည်ဖြစ်ရာ ဘယ်လိုမှထိမ်းမထားနိုင်တော့ဘဲလရေတွေ ကို ခင်ထားငယ်၏ စေါက်ဖုတ်အတွင်းသို့ အားကုန် ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။“
“ ကိုဇော့်လရေတွေ ပန်းလိုက်ပြီ..ထားရေ့..ရော့..အား..အား..”” မင်းဇော်က အံကြိတ်ကာပြော ရင်းတဆပ်ဆပ်တုန်တက်နေလေသည်။ လုံးကျစ်သော ဖင်သားနှစ်ခုကလည်း တွန့်ခါနေသည် ခေါင်းလည်းပေါ့သွား၏။ သူ့လီးထိပ်မှ လရေများသည် ပြစ်ကနဲ..ပြစ်ကနဲ..ခပ်ပြင်းပြင်းကို ပန်းထွက်သွားသည်။ ပန်းထွက်အားက အတော့ကိုပြင်းထန်သည်စေါက်ခေါင်း၏ နက်ရှိုင်းလှသည့် အတွင်းပိုင်းရှိအသားနုနုလေးများတိုင်အောင်ပင် သုတ်ရေတို့တိုးဝင်ရောက်ရှိ သွားသည်။ ထိုနေရာများအထိ မည်သည့်ယောက်ျားသား၏ လရေမျှရောက်ခြင်းမရှိသေးးပါ။ ခင်ထားငယ် ၏ သွေးသားများအဖို့ ထူးကဲလေသော အရာသာ အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်တော့ သည်။ မင်းဇော်သည် သုတ်ရေပန်းထွက်လျက်ရှိသော လီးတန်ကြီးကို ခင်ထားငယ်၏ စေါက်ဖုတ် အတွင်း အဆုံးတိုင်အောင်ပင် ဖိကပ်ထိုးသွင်းထားလျက် ခင်ထားငယ်ကိုယ်ပေါ်တွင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ရင်း ဇိမ်ခံနေသည်။ ခင်ထားငယ်ကလည်း မင်းဇော်၏လီးကို အားရပါးရစေါက်ဖုတ်ကြွက်သားများဖြင့်ညှစ်ထားသလို ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကလည်း မင်းဇော်ကိုအားကုန်ညှပ်ထား လိုက်ကာ ကာမအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားနေသည်။
““ ကောင်းလိုက်တာ..ကိုဇော်ရယ် ..နောက်ကို ဒီလိုမျိုးလိုးပေးရမယ်နော်..ဒါဘဲ”” ““ ကိုဇော်လည်းကောင်းလိုက်တာ..ထားရယ် ..ထားအဖုတ်ကအရမ်းကိုကောင်းပါလားကွာ ဒီအဖုတ် ထဲမှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ လရေမျိုး တစ်ခါမှမပန်းထုတ်ပေးခဲ့ ဖူးဘူး..သိတ်ကောင်းတယ် ကွာ..အရမ်းကိုဘဲ..””သုတ်ရေတွေပန်းထည့်ရင်း မင်းဇော်ကတဖွဖွပြောနေသည်။ သည့်နောက်တော့ နှစ်ယောက် သား ထပ်လျက်သား မှိန်းနေကြသည်..လူတွေကသာမှိန်းနေကြသည် လီးနှင့်စေါက်ဖုတ် ကမူ မှိန်းမ နေကြပါ အဆောင့် အလိုး အကော့အပင့်သာ ရပ်သွားသော်လည်းအရှိန်မသေနိုင်သေးဘဲ မင်းဇော်က လီးကို ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲလုပ် ပေးလျက်ရှိသလိုခင်ထားငယ်ကလည်း မင်းဇော်နှင့်အတူ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးဘဲ စေါက်ဖုတ်ကြွက်သားများနှင့် တောင်နေဆဲလီးကို မှန်မှန် ညှစ်ပေးလျက် ရှိသည်။ ပါးစပ်မှလဲ.. ““ အရမ်းကိုကောင်းတာဘဲ ကိုဇော်ရယ် နောက် တစ်ခါလိုးရင်..စေါက်ဖုတ်တင်မကဘူး ဖင်ကိုပါလိုးပေးပါနော်..ထားဖင်ခံချင်တယ်ကွယ် ”” ““ ထားနဲ့လိုးရတာ သိတ်ကိုကောင်းတယ်ကွာ..စိတ်ချထားရေ..ကိုကလည်းထားဖင်ကိုကိုယ့်လီးအဆုံး သွင်းပြီးလိုးချင်တယ်ကွာ..””အတန်ကြာအောင်မှိန်းနေပြီး အသက်ရှူမှန်လာသောအခါမင်းဇော်က ခင်ထားငယ် ၏ညာဖက် ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်သည်။
တစ်ကယ်မြတ်နိုးမှုနှင့်နမ်းသည့်အနမ်းမို့ခင်ထားငယ်၏ ရင်ထဲတွင် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်သွားလေသည်။ မင်းဇော်သည် ခင်ထားငယ်အပေါ်မှ ဘေးသို့လှိမ်းဆင်းလိုက်သည် ယခုထက်တိုင်ပင်မာန်မကျချင်သေးသော လီးက ခင်ထားငယ်၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဖွတ်ကနဲမြည်ကာကျွတ်သွားသည်။ ခင်ထားငယ်၏ ရင်ထဲတွင်လည်း လီးကျွတ်သွား၍စေါက်ဖုတ်အတွင်း၌ ချောင်သွားကာ ရင်ထဲတွင်လည်း ဟာသွားသည်။ လရေများစီးကျလျက်ရှိသော မိမိ၏စေါက်ဖုတ်ကိုလည်း မင်းဇော်က အ၀တ်တစ်ခုနှင့် ယုယစွာသုတ်လိုက်သည် အရေးထဲအ၀တ်စကစေါက်စေ့ကို ပွတ်မိလိုက်၍ ကြက်သီးများဖြန်းဖြန်းထသွားရသေးသည်။ ““ ကျန်နေသေးတဲ့ ထားရဲ့ အတိတ်ကအဖြစ်ဆိုးတွေက်ို နားထောင်ချင်သေးလားကိုဇော်..”” ““ ကျော်ကျော်မိုးတို့ လူသိုက်က ထားကို အတင်းဝိုင်းပြီး လုပ့်ခဲ့တဲ့အပြင်အခြားအဖြစ်ဆိုးတွေ ကြုံ ရသေးလို့လား..”” ““ အင်း..ကြုံရသေးတယ် သိတ်ကိုဆိုးဝါးလှတဲ့ အဖြစ်တွေပါဘဲ ကိုဇော်ရယ်..”” ခင်ထားငယ်ကပြောရင်း မျက်နှာကလေးညိုးကျသွားသည်။ မင်းဇော်က ခင်ထားငယ်ကို သိုင်းဖက်ထားသည်။
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ အမှန်ဘဲ ကိုဇော် ဒါပေမဲ့ ထားပြောပြပါမယ်၊ ဒီလို ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကြင်နာတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ဖွင့်ထုတ်ပြောပြချင် တာကြာပါပြီ..၊ ထားရဲ့ပထွေးက ထားအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ယုတ်မာခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်။””““ ထားရဲ့ ပထွေးကထားကို ဟို..ဟို..”” ““ ဟုတ်တယ် သူကလည်း ထားကို ဗျင်း ကျင့်ခဲ့သေးတယ် ကျင့်တာမှ ရိုးရိုးတန်းတန်း တောင်မဟုတ်ဘူး”” ခင်ထားငယ်က သူ့ကို ပထွေးဖြစ်သူ ဦးကျော်မိုးက ရက်စက်စွာပြုကျင့်ခဲ့ပုံကို ခရေစေ့တွင်းကျ ပြန်ပြော ပြလေတော့သည်…။ဦးကျော်မိုးသည်ကား ခင်ထားငယ်၏ ပထွေးဖြစ်သည်။ ခင်ထားငယ်မိခင်၏ နောက်အိမ်ထောင် ဖြစ်ကာ အတူတူနေကြသည်။ ထိုညက မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ထားလည်းအိမ်တွင်မရှိပေ။ ဦးကျော်မိုးသည် အရက်သောက် တတ်သူဖြစ်ပြီးအရက်မူးလာပါက သွေးဆိုးတတ်သည်။ ထိုသို့အရက်မူးလာလျင် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ထားကိုလူမဆန်စွာ လိုးတတ်သည်ကိုလည်း ခင်ထားငယ်သိသည် ။ အခန်းချင်းက ကပ်ရက်ဆိုတော့ အသံများက အကုန် ကြားနေရသည် ။ တခါတုန်းက ညဖက်ခင်ထားငယ် တစ်ယောက်တရေးနိုးစဉ်မှာ တစ်ဖက်ခန်းမှ တိုးတိုးတိုးတိုး နှင့်အသံများကြားရ၍ နားထောင်ကြည့်ရာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့်ပထွေးဖြစ်သူတို့ လိုးနေကြောင်းသိရသည်။
စူးစမ်းလိုသည့်စိတ်ကြောင့် ချောင်းကြည့် မိရာ .. မိခင်ဖြစ်သူကိုလေးဘက်ထောက်ပြီး နောက်မှ ဖင်ကို ၆ လိုးနေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအခါကတည်းက မိန်းမတွေအတွက် ခံစရာသည်စောက်ဖုတ်သာ မက ဖင်လည်းခံလို့ ရကြောင်း လီးကိုလည်း စုပ်ကြကြောင်းကို သိလိုက်ရသည်။ ယခုညတွင် မိခင်ဖြစ်သူက အပြင်သို့သွားနေပြီး ဦးစောမိုးသည် အရက်များမူးနေသည်။ခင်ထားငယ်လည်း အခန်းထဲတွင် ၀င်၍ဂျက်ချထားလိုက်သည်။ ထိုသို့တံခါးပိတ်ဂျက်ချပြီးချိန်မှာပင် ဦးကျော်မိုး အခန်းရှေ့သို့ ရောက် လာသည်။ ““ ဟေ့ ငယ်ငယ် တံခါးဖွင့်စမ်း ငါ့သားပြောပြထားတဲ့ နင့်အကြောင်းတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောစရာရှိတယ် ငါနင်နဲ့ စကားနဲနဲပြောချင်တယ်..”” ““ ဟင့်အင်း အန်ကယ် အရက်မူးနေတယ် ဒီလိုမူးနေတုန်း ငယ်ငယ်စကားမပြောချင်ဘူး””““ တောက် ခွေးကောင်မလေး စေါက်စကားမရှည်နဲ့ တံခါးကိုဖွင့်စမ်း မဖွင့်ရင် ငါအတင်းဖွင့်ပြီး ၀င်လာ မှာနော် ”” ““ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မဖွင့်ဘူး မဖွင့်ဘူး ”” ခင်ထားငယ်သည် အိပ်ယာပေါ်တွင်ကြောက်လန့်စွာ ကုတ်ကုတ်ကလေး နေရင်းအသံကုန် ပြန်အော်သည် ကြေက်စိတ်ဖြင့် သူမတစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရင်နေသည်။ သူမသည် ရာဂကြွယ်ဝကာ နှာကြီး သွေးဆူသော မိန်းမစားမျိုးဖြစ်ရာ တနည်းနည်းဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမိ သည်နှင့် ရမက်ဇော နိုးကြားလာမြဲဖြစ်သည်။ ယခုလည်း အလွန်ကြောက့်လန့် တုန်လှုပ် နေရာ ကြောက်စိတ်နှင့် ယှဉ်သည့် ရမက်ဇော နိုးကြားမှုဖြစ်နေသည်။ ခင်ထားငယ်၏စေါက်ဖုတ်သည် တိုး၍တိုး၍ဖေါင်းကြွနေသည်။
နို့သီးခေါင်းများထောင်ထလာသည်။ သည်ကြားထဲ ညဖက်မိမိအိပ်ခန်းထဲတွင် ရှိနေချိန်မ်ို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလည်း ၀တ်မထား ဘလောက်အင်္ကျီနှင့် တက်ထရွန်ထမီ တပါတ်နွမ်းကိုသာတစ်ထပ်တည်း ၀တ်ထားသည်။ ဘလောက်အင်္ကျီမှာ အဟောင်းဖြစ်ကာ ယခုကိုယ်လုံးနှင့် အတော်ကိုကျပ်နေသည်။အသားကပ် အခြေ အနေနီးပါးဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့ပါးလှပ်ခြင်းမရှိသော်လည်းပြောင်းအိသော အလပ်စတစ်သားဆိုတော့ မို့ဝန်း သောရင်သားဆိုင်တို့ကို သည်အတိုင်းမြင်နေရသည်။ အထူးသဖြင့် နို့သီးခေါင်းများက ချွန်ကော့ကာ ထောင်တက်နေပုံက အပြတ်ကိုပီပြင်နေသည်။ (ကျော်ကျော်မိုးတို့ လူသိုက်ဆွဲကိုင် စို့ထားပြီးပြီမို့ခင်ထားငယ်၏ရင်သားများ သည် အထူးပင် ဖွံဖြိုးကြီးထွားကာ နို့သီးခေါင်းများကလည်း ရှည်နေပါသည်။) ဦးစောမိုးသည် စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းဖြစ်နေပါသည်။ အရက်မူးလျင်သွေးဆိုးတတ်သည်။ယခု ဦးစောမိုး အရက်အတော်ကလေး မူးနေသည်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျင် ဦးစောမိ်ုးသည်ခင်ထားငယ် ကို တပ်မက်နေသည်။ ယခုကျော်ကျော်မိုးတို့တစ်သိုက်က ခင်ထားငယ်ကို ၀ိုင်းလိုးခဲ့ကြပြီး လီးကိုလည်းစုပ်ခိုင်း ခဲ့ကြပြီိး ဖြစ်သည် ဟုသိရသောအခါ ဦိးစောမိုး၏စိတ်တွင် အရမ်းကိုမနာလိုဖြစ်နေသည်။ သည်ကြားထဲ အရက်ကလည်း မူးနေသည် ဖြစ်ရာ ပို၍ဆိုးနေသည်။ ထို့ပြင်ခင်ထားငယ်ကလည်း တံခါးကို အတွင်းက ပိတ်ထားသဖြင့်ဦိးစောမိုး၏ကြမ်း ကြမ်းရမ်းရမ်းလုပ်ချင်သော ဗီဇကို နှိုးဆွ ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ သည်။ ဦးစောမိုးသည် ပိတ်ထားသော တံခါးကို ကိုယ်လုံးနှင့်တိုက်ဖွင့်သည် အရပ်က ခြောက်ပေ ကျော်ပြီး ထွားကြိုင်းတောင့်တင်းပြီး အားအင်လည်းကြီးမားသန်စွမ်းလှသည်။ပုခေါင်းစောင်းနှင့် တိုက်ပြစ်လိုက်ရာ တစ်ချက်ထည်းနှင့် အခန်းတံခါးဂျက် ပွင့်ထွက်သွားစေသည်။
တံခါးလည်း ၀ုန်းကနဲ ပွင့်သွားသည်။ သည်လိုတံခါးကို အတင်း တွန်းဖွင့်နိုင်သည့်အတွက် ဦးစောမိုး၏ ကြမ်းချင်ရမ်းချင် စိတ်များသည်ပို၍ဒီဂရီမြင့်တက်လာသည်။ အရက်ရှိန်က လည်းရှိနေသေးရာ၊ ထိုစိတ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အသိစိတ်ကလည်း အလွန်ကိုအားနည်းလျက်ရှိသည်။ ဦးစောမိုးသည် သွေးညှီနံကရသည့် ငမန်းလိုမျိုးဖြစ်နေသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အထူးသဖြင့် ဆန့် ကျင်ဖက်လိင် မိန်းမတစ်ယောက်ကို အတင်းအကြမ်းပတမ်းပြုချင်သည့်စိတ်များက တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်၍နေသည်။ တံခါးပွင့်သွားပြီးနောက် ဦးစောမျိုးသည် အခန်းထဲသို့ လွှားကနဲ ၀င်ရောက်လိုက်သည်။အရက်မူးနေသည့်အပြင် စိတ်လည်းအရမ်းခက်ထန်နေသည်မို့ ဦးစောမိုး၏ မျက်နှာကြီးကတင်းမာခက်ထန်နေကာ မျက်ထောင့်နီကြီးဖြင့် တကယ့်ဘီလူးသရဲစီးသလိုဖြစ်နေသည်၊ နဂိုကမှအကြောက်ကြီးကြောက်နေရှာသူ ခင်ထားငယ်မှာ အခန်းထဲ ခုန်ဝင်ရောက်ရှိလာသောဦးစောမျိုးကိုတွေ့လိုက်သောအခါ လိပ်ပြာလွင့်မတတ်ဖြစ်ကာ ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်သည်။ ““ အား..အား..”” သူတို့အိမ်ရှိရာနေရာသည် လူသူအရောက်အပေါက် အလွန်နည်းပါးကာ အိမ်နီးနားချင်း များကလည်း အလှမ်းဝေးလှသည်ဖြစ်ရာ ခင်ထားငယ်အော်သံကို မည်သူမျှမကြားနိုင်ပေ။ ခင်ထားငယ် အဖို့မှာလည်း ဖြစ်ပေါ်လာသော တဏှာရမက်စိတ်သည်လည်း တဟုန်ထိုး အခေါင်အဖျားသို့ရောက်ရှိသွားသည်။
စောက်ဖုတ်ထဲမှစောက်ရေများ ယိုစီးကျနေ သည်မှာလည်း စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး စိုရွှဲနေယုံသာမက ဖင်ကြားဖင်ဝ မှတစ်ဆင့် ထမီကိုပါစိုနေပေပြီ ““ ကိုင်း နင်နဲ့ ကျော်ကျော်မိုး ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ငါ့ကိုပြောပြစမ်း… ”” ““ သူတို့က ငယ်ငယ့်ကို ၀ိုင်းပြီးဗျင်း ကျင့်ကြတာပါ။ ပြီးတော့လီးစုပ်ခိုင်းလို့လဲ စုပ်ပေး ရပါသေးတယ် ”” ဦးစောမိုးက ကျားဟိန်းသံကြီးနှင့်မေးလိုက်ရာ ခင်ထားငယ်ကလည်း အလန့်တကြားပင် ပြန်ဖြေလိုက်၏ သူမ ပြောသည့်စကားများသည် အမှန်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ မှန်လွန်းသည့်အတွက် တိတိကျကျ နှင့် တစ်တစ်ခွခွ စကားးလုံးများပါသွားသည်။ သည်လိုစကားအသုံးအနှုံးမျိုးကို အမျိုးသမီးတွေ ရင့်ရင့်သီးသီးပြောလေ့မရှိကြပါ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားကြီး တစ်ယောက်ရှေ့တွင်ပြောလေ့မရှိကြပါ။ ခင်ထားငယ်မှာလည်း သည်လောက်အထိ နှုတ်ရဲလျှာရဲ ရှိသူမဟုတ်ပါ ။ သည်လို တစ်တစ်ခွခွပြောဆိုလိုက်မှုသည်၊ ခင်ထားငယ်အပေါ် ဦးစောမိုး အနေဖြင့်မကောင်းပိုမြင်သွား သည်။ ကမြင်းကြောဆွဲကာ နန့်ကြောဆွဲလိုသည့် မိန်းခလေးမို့သာ ၈ သည်လို တစ်တစ်ခွခွနှင့် ရုန်းရမ်း ကြမ်းတမ်း သော စကားမျိုး ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်မည်ဟုဦးစောမိုးက တွေးလေတော့သည်။
ဦးစောမ်ိုးသည ဒေါသနှင့် တဏှာရောင်ထနေသော မျက်လုံးကြီးများဖြင့် ခင်ထားငယ်ကို ကြည့်လိုက်သည် ထိုသို့ကြည့်လိုက်ချိန်တွင် ခင်ထားငယ်၏ ရင်သားများကိုလည်းမြင်လိုက်သည်။ အလွန် ကြောက်လန့် တုန်လှုပ်ကာ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေချိန်မို့ ခင်ထားငယ်၏ အသက်ရှူသံများက ပြင်းထန်နေသည်။ ရင်ဘတ်သည် မို့တက်လာလိုက် နိမ့်ကျသွားလိုက်နှင့် နိမ့်မြင့် လှုပ်ရှား လျက်ရှ်ိ သည်။ခပ်ကြပ်ကြပ်ဖြစ်နေသော ဘလောက်အင်္ကျီ တစ်ထပ်တည်းသာ ရှိနေသည်မို့ …တက်လာလိုက်ကျသွားလိုက်နှင့် လှုပ်ရှားနေသောရင်သားကြီးနှစ်ခုနှင့် ချွန်ကော့ တက်ကာ အင်္ကျီသားကိုပင် ထိုးဖေါက်လုဖြစ်နေသော နို့သီးခေါင်းကလေးများက ဦးစောမိုးကိုကို မြှူဆွယ် နေကြ သည်။ ဦးစေမိုး၏မျက်လုံးများက ရင်သားဆိုင်များပေါ်သို့ကျရောက်လျက်ရှိသည်။ ကျွတ်ထွက်မတတ် ကို စူးစူးစိုက် စိုက်ကြီးကြည့်နေသည်။ ခင်ထားငယ်သည် ဘရာစီယာကိုပင် ၀တ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကို ဦးစောမိုးသိလိုက်၏။ ဒေါသရောင်ပေါက်နေသော မျက်လုံးများသည် ရမက်ခိုးများ ပြည့်လျှံလာသည်။ ဒေါသစိတ်နေရာတွင် ရမက်စိတ်သည် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲ ရောက်ရှိလာသည်။ ““ အန်ကယ့်ကိုတောင် သူ့အလိုလိုက်အောင် ကြံဖန်ပြီး ကျုံးသွင်းလိမ့်ဦးမယ် လို့ကျွန်တော် ထင်တယ် ”” ကျော်ကျော်မိုး၏စကားများကို ဦးစောမိုးပြန်လည် ကြားယောင်လာသည်။
မိမိကိုမြှူဆွယ်လျက် သူမအလို ကျဖြစ်စေလျက် အပိုင်ကိုင်လာနိုင်အောင် ခင်ထားငယ်ကဘရာစီယာပင်မ၀တ်ဘဲ ရင်သားစိုင်များကို ပကတိ အတိုင်းနီးပါး ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်နေစေမည့်အခြေအနေ ဖန်တည်း ထားခြင်း ဖြစ်မည် ဟု ဦးစောမိုးက ထင်မိ၏။ ““ အင်း..ဒီချာတိတ်မ..ငယ်သာငယ်တယ် အလာကြီးပါလား ၊မအေ့သွေး အပြည့်ရှိနေတယ်။”” ဦးစော မိုးသည် ဒေါ်ခင်ထားကို အတိအလင်းမဟုတ်ဘဲ တိတ်တိတ်ပုန်းသိမ်းပိုက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်ထား မည်သို့ရာဂကြွယ်ကာ အလိုရမက်ပြင်းပြထက်သန်သည်ကို ဦးစောမိုး ကောင်းကောင်းကြီး သိသည်။ ““ ငါ့ကိုလိုရာ ကျုံးသွင်းပြီး လိုရာခိုင်းမလို့ ..ဟင်း ကျော်ကျော်မိုးကိုဘဲ ရမယ် ငါ့ကိုဘယ်ရမလဲ သူ့ကိုတောင် ငါက အပြတ်လိမ့်နေအောင် လိုးပြစ်လိုက် ဦးမယ် ။ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ” ”အရက်လည်းမူးနေရာ ဦးစောမိုးသည် သိတ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆင်ချင်ကာ မစဉ်းစားနိုင်တော့ အရက်မူးနေ သူတို့ထုံးစံ ရမက်စိတ်ကလည်း ပြင်းပြနေသည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်လိုရာဖက်သို့သာ ဆွဲတွေးလိုက်တော့သည်။ ထိုသို့ တွေးတောပြီးသည်နှင့်ဦးစောမိုးသည် ခင်ထားငယ်ဝတ်ထားသော ဘလောက်(စ်) အင်္ကျီ ရင်ဖတ်ကို အတင်းဆွဲ ဖြဲလိုက်သည်။ ““ ဗြစ် ”” အင်္ကျီရင်ဘတ်ပြဲသွားသည် ခင်ထားငယ်မှာ ရင်ဘတ် ဟင်းလင်းဖြစ်လျက် မို့ဝင်း ထွားအိ လေသော နို့အုံကြီး နှစ်ခုသည် တုန်လှုပ်ကာပေါ်လာသည်။ ခင်ထားငယ်မှာကြောက်လွန်း၍ ကြက်သေသေနေမ်ိသည်။ အထင်းသား အရှင်းသား ပေါ်လာသော နို့အုံကြီးနှစ်ခုကို ဖုံးအုပ် ကာကွယ် ဖို့ကိုပင် သတိမရ မှင်တက်မိကာ သည်အတိုင်းမလှုပ် မယှက်ရှိနေသည်။
အလန့်တကြားပြုလိုက်ရသည်မို့ ရင်သားတို့ကိုလက်ဖြင့်ကာ သည့်အသွင်မဟုတ်ဘဲ လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်ကာပြသည့်သဘောမျိုး ထင်စရာဖြစ်သွားသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားရှိစေါက်ဖုတ်ကို ဖမ်းနှိုက်သည် ဖေါင်းမို့လျက် စေါက်ရေတွေ ရွှမ်းရွှမ်းစိုနေသော စေါက်ဖုတ်မို့မို့ကြီးကို စမ်းမိသည်။ ““ ဟော.ကြည့်စမ်း နင့်စေါက်ဖုတ်က ဖေါင်းမို့နေပြီး စေါက်ရေတွေစိုရွှဲနေပါပကောလား၊ သိတ်ကို အလိုး ခံချင်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီ။ နင်က ကျော်ကျော်မိုးပြောသလို သိတ်ကမြင်း ကြော ထချင်တဲ့ မိန်းခလေးဘဲ ”” ၁၀ ဦးစောမိုးက ပြောပြောဆိုဆို အရေတွေ စိုရွှဲနေသော စေါက်ဖုတ်ထဲသို့ လက်ခလည်ကို ဆပ်ကနဲ ထိုးထဲ့ လိုက်သည်။““ အို…”” ခင်ထားငယ် ဆတ်ကနဲတွန့်ကာ ပါးစပ်မှရေရွတ်သံကလေးပေါ်ထွက်လာသည်။ မိမိသွေးသားတွေလှုပ်ရှားနိုးကြွနေကြောင်းကို ခင်ထားငယ်ယခုမှသိရသည်။ သည်လိုဖြစ်နေသည့်အတွက် အရမ်းကိုရှက်ရွံ့မိသည်။ ဘာကြောင့်များ သည်လို ရမက်တွေ နိုးကြား နေရသည် ကိုတော့ ချာတိတ်မလေးမသိရှာပါ ထို့ပြင် ဦးစောမိုး၏လီးတန်မတ်ထောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို သူမ၏ ထမီပြေလျှောကျ၍ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပေါ် နေသည့်တင်ပါးကြီးတွင် ဖုဖုထစ်ထစ်ဖြင့် ထောက်မိ နေသည့် အတွေ့အထိအရ ခင်ထားငယ်သိလိုက်ရပြန်သည်။ ““ အခု နင်က ငါ့ကိုလည်း လာပြီးမြှူဆွယ်နေပြန်ပြီ နင့်ကို အရမ်း လိုးချင်စိတ်တွေပေါ်လာအောင် နင်က လုပ်နေတာ မဟုတ်လား ငယ်ငယ်..ဟင်”” ဦးစောမိုး၏စကားတွေကရင့်သီးလွန်း လှသည်။ ““ မဟုတ်ပါဘူး အန်ကယ်ရယ် မဟုတ်ရပါဘူးရှင် လွှတ်ပါ ..ကျွန်မကိုလွှတ်ပါ ”” ခင်ထားငယ်က ငိုရိုက်ကာပြောရင်း ရုန်းမိသည်။ ဦးစောမိုးသည်ကျွဲပေါက်တစ်ကောင်လို သန်စွမ်းသည် ဖြစ်ရာ ခင်ထားငယ်အနေဖြင့်ဘယ်မှလျင် လွတ်အောင်ရုန်းနိုင်မည်နည်း လွတ်အောင်မရုန်းနိုင်သည့်အပြင် ရုန်းရင်းကန်ရင်းနှင့်ပင်အထက်ဆင်ပြုတ်ကာ လျော့ရဲရဲဖြစ်နေသော ထမီကို ပို၍ပြေလျောကျသည်၊ ကားအိနေသောတင်ပါးကြီး အဖွေးသား အပြောင်သားပေါ်လာသည်။ ထို့ပြင် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေသည့် သူမ၏တင်ပါးကြီးသည် ဦးစောမိုး၏ဆီးစပ်ကိုပွတ်မိနေသည်။
ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ကော့ကာ ပွတ်ပေးနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခင်ထားငယ်တစ်ယောက် ရာဂစိတ်နိုးကြွလာကာ အပြတ်ကိုအလိုးခံခြင်နေသည်ဟု ထင်ထား သည့် စိတ်ကလည်း ပို၍ခိုင်မာလာသည်။ ထူးဆန်းသည်ဟုတော့ဆိုရမည် ထင်မြင်စဉ်းစားတတ်သည့် ဦးနှောက်က ကြောက် လန့်ကာ ငြင်းဆန်နေသော်လည်း ဖိုမဓါတ်ကို လိုလားတောင့်တနေလေအောင် ခင်ထားငယ်၏အသွေးအသားများ ကမူ ကာမစပ်ရှက်မှုကို အထူးလိုလားတောင့်တလျက်ရှိလေသည်။ ယခုအချိန်၌ ဘယ်ယောက်ျား၏လီးဖြစ်ဖြစ် အလိုးခံခြင်နေသည်။ ပြီးတော့သူမကို စိုးရိမ် ကြောက်လန့် အောင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တွယ် ပြုကျင့်မှုကို ထူးထူးခြားခြားကြီး လိုလား တောင့်တလျက် ရှိလေသည်။ ရမက်စိတ်ရော ကြောက်စိတ်ရော ပြိုင်တူဖြစ်ပေါ်နေ၏။ ဦးစောမိုးသည် ခင်ထားငယ်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်သည်၊ အစုတ်စုတ်အပြတ်ပြတ် အကျွတ်ကျွတ် အလျော့လျော့ ဖြစ်နေသောထမီနှင့် အင်္ကျီတို့ကို အပြတ်ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ခင်ထားငယ်မှာ အ၀တ်မပါ ဗလာ ကိုယ်ထည်းဖြစ်သွားရသည် ။ ပေါင်ကြားမှ စေါက်ဖုတ်မှာလည်း ဦးစောမိုးကို စိန်ခေါ်သလိုဖြစ်နေသည်။
““ ကဲ ငယ်ငယ် နင့်ကို ငါလိုးတော့မယ် နင်ကအလိုးခံခြင်နေတာဆိုတော့ မှတ်လောက် သားလောက် အောင်ကို လိုးမယ်။ လိုးတာမှ စေါက်ဖုတ်ကို မဟုတ်ဘူး ဖင်ကိုလိုးမယ် ..သိရဲ့လား ”” ဦးစောမိုးက တစ်ကယ်ပင်လူစိတ်ပျောက်နေပေပြီ၊ ခင်ထားငယ်သည်လည်း သိတ်ကို ကြောက်နေသလို အရမ်းကိုအလိုးခံနေချင်သည်မှာ ဦးစောမိုးပြောသည့်အတိုင်းပင်။ သို့သော် လစ်သည်နှင့် ကြောက်ကန်ကန်သည့် အနေဖြင့် ဦးစောမိုးပေါင်ကြားမှ လီးကြီးကို လက်ဖြင့် လှမ်းကိုင်ကာ လီးကိုတအားညှစ်လိုက်သည် ဦးစောမိုးမှာ လည်း ဂွေးတက်လုမတတ် နာကြင်သွားသည်။ ““ အား..”” နာကြင်မှုကြောင့် ဦိးစောမိုးမှာ နောက်သို့ဆုတ်သွားသည်၊ ခင်ထားငယ်ကို ချုပ်ဖမ်းထားမှု တွေလည်း လွတ်သွားသည် ၊ထိုခဏ၌ ခင်ထားငယ် ထပြေးသည် ..သို့သော်မရ ဦးစောမိုးက ခင်ထားငယ်ကိုဖမ်းချုပ်ကာ ကုတင်ပေါ် ပြန်လှဲချလိုက်သည်။ မျက်နှာကို လက်ဝါးကြမ်းကြီးဖြင့် ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်သည်။ ၀မ်းပိုက်ကိုလက်သီးဖြင့်တစ်ချက်ထိုးလိုက်သည် ခင်ထားငယ်မှာ အသက်ရှူပင်ကြပ်သွားကာ ကုတင်ပေါ်ဝယ်ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားရ ရှာသည်။ ဦးစောမိုးသည် ၀တ်ထားသော ပုဆိုးကို ဂွင်းလုံးပုံချွတ်ကာ ခင်ထားငယ်ပေါ် တက်မှောက် လိုက်သည်။ ဘယ်ဖက်လက်မောင်းကို လည်မြိုပေါ်ဖြတ်တင်ကာ ခပ်တင်းတင်းဖိထားလေရာ ခင်ထားငယ်မှာ ဘယ်လိုမှရုန်းကန်ခြင်း မပြုသာပါ၊ ဦးစောမိုး၏ညာလက်ကတော့ ခင်ထားငယ်၏ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်လာသည်။ စေါက်ဖုတ်ကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်သည်။ စေါက်စေ့ကို ဆွဲလိမ်သည် စေါက်ခေါင်းထဲသို့လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလည်ကိုထဲ့ကာ မွှေပေးသည် ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက် လုပ်နေသည်။ဦးနှောက်က သဘောမတူ လက်မခံသော်လည်း ဦးစောမိုး၏ကြမ်းတမ်းစွာပြုကျင့်နေသည်ကို ခင်ထား ငယ်တစ်ယောက် နာကျင်မှုများအပေါ်မှာသာယာဇိမ်တွေ့နေသည်။
ဦးစောမိုးကတော့ ခင်ထားငယ်အော်ဟစ်နေ သည်ကို နည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်ပါ ။ လီးကိုခင်ထားငယ်၏ ဖင်ထဲသို့သာ အတင်းသွင်းနေသည် ၊ ခင်ထားငယ် ကလည်း တိုးဝင်လာသော လီးထိပ်ပြဲဒစ်လန်ကြီးကို မ၀င်အောင် ဟန့်တားသည့်အနေဖြင့် ဖင်ခေါင်းထဲမှကြွက်သား များကိုအတင်းညှစ်လိုက်သည် ဤသို့ပြုလိုက်သည်ကိုက ဦးစောမိုးကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် အောက်ပေး ပေးလိုက်သည့်နှယ်ဖြစ်သွားကာ ဦးစောမိုးမှာလည်း မတွေ့ဘူးသည့်ထူးခြားသော အရသာကိုခံစားရင်းလီး ထိပ်ပြဲ ကြီးကို ဖင်ထဲသို့အဆုံးထိအောင်ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ ဖင်ခေါင်းက ကျဉ်းသော်လည်း လီးဒစ်ဝင်နေပြီမို့ သွင်းလျင်သွင်းသလောက် ကျန်အပိုင်းကလည်း တိုးဝင်သွားသည်။ ခင်ထားငယ်မှာ ကောင်းတာရော နာတာပါရောပြွမ်းပြီး ဦးစောမိုးမှာတော့ အပြတ်ကို ပီတိဖြစ်နေသည် ကျဉ်းကြပ် လှသည့်ဖင်ခေါင်း၏ အရသာအတွေ့အထိကလည်း ဇိမ်ရှိလှသည် ခင်ထားငယ်၏ နာကျင်သာယာစွာ အော်ညီးသံ ကလည်း ဦးစောမိုးကို အားရစေသည် တစ်ကယ်တော့ခင်ထားငယ်မှာ ဖင်ခံရတာကို အလွန်ကြိုက်သည် ဦးစောမိုး အားရပါးရမိမိဖင်ကိုလိုးမှာကိုလည်း အရမ်းကိုကျေနပ်နေသည်။ လီးက ဖင်ထဲသို့ ပိုတိုးဝင်သွားလေလေ ဦးစောမိုးအဖို့အံပင်ကြိတ်ယူရလောက်အောင်ပင် အရသာရှိလေ လေဖြစ်သွားသည်။သွင်းကောင်းကောင်းနှင့်ဖိသွင်းရာ နောက်ဆုံးတွင် ရှစ်လက်မကျော် ရှည်သည့် လီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး ဖင်ခေါင်းပေါက်လေးထဲသို့ အဆုံးဝင်သွားလေတော့သည်။
““ အား..နင့်ဖင်ထဲကို ငါ့လီးအကုန်လုံးဝင်သွားပြီ..နင့်ဖင်ပေါက်က ကျဉ်းပြီး..စီးပိုင်နေတာဘဲ ကောင်း လိုက်တာကွာ..တစ်ကယ်တော့ ဖင်ကိုလိုးရတာကစေါက်ဖုတ်ကို လိုးရတာထက် ဆယ်ဆပိုကောင်းတယ်ကွ.. သိရဲ့လားငယ်ငယ်..”” ““ ဟုတ်ကဲ့..ရှင့် ”” လီးကိုအဆုံးသွင်းညှောင့်ရင်း ဦးစောမိုးက ကျေနပ်အားရစွာပြော လိုက်သည်။ ခင်ထားငယ်ကလည်း ကောင်းပေမဲ့ အားရပါးရမခံစားရသေးပေ..။ ခင်ထားငယ်ခမျာမှာတော့ ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲသို့ ကြီးမားတုတ်ခိုင် ရှည်လျားသော လီးတန်ကြီး အဆုံးထိုးသွင်း မှုကို ခံနေရသောကြောင့် ၊ ဖင်ခံခြင်းအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားနေရသည် ၊ နာကျင်ပြည့်ကျပ်ခြင်းနှင့် ဖင်ဇိမ်ရှိခြင်းတို့သည် အရာရာကို မေ့ပျောက်နိုင်စွမ်းရှိနေသည်။ လီးကိုအဆုံးဝင်အောင်သွင်းပြီးနောက် ဦးစောမိုးသည် ခင်ထားငယ်ဖင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် စတင်ကာ ဆောင့်လိုးနေတော့သည်။ ဖင်ခေါင်းလေးက ကျဉ်းကျပ်သည့်အတွက် ဆောင့်လိုး ရတာသည် အပျိုစင် စေါက်ဖုတ်ကို လိုးရတာထက် အပြန်တစ်ရာသာသည် ထို့ကြောင့်လည်း ဦးစောမိုးသည် ဖင်လိုးရတာကိုပိုကြိုက်သည်။ ဦးစောမိုး အဖို့ရာမှာ လောကစည်းစိမ်ကိုရကာ ဖီး(လ်)ပိုတက်နေသည်။ ခင်ထားငယ်မှာတော့ ကောင်းလိုက်နာလိုက်ဖြစ်ကာ အကြိုက်တွေ့နေသည် သို့သော်နာသည် ဟုသာ တွင်တွင်ပြောနေသည်။
ဆောင့်လိုးချက်များက ပြင်းထန်လှသည်ဖြစ်ရာ ကောင်မလေးခမျာ ဦးစောမိုး၏ လီးကြီးဖင်ထဲသို့ ၀င်လိုက်တိုင်းထွက်လိုက်တိုင်း အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ အသက်ရှူမှားကာ နာကျင်အောင့်ကောင်းကြီးဖြင့် ဖင်ကြီးကိုပို၍ပင်ထောင်ပေးလိုက်သည် လိုးပါစေလေ..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရေတွေကလည်း အရမ်းကိုထွက်နေသည် သည်ကြားထဲ ခင်ထားငယ်က နောက်ထပ် လီးတစ်ချောင်းကစေါက်ဖုတ်ကိုလိုးနေရင် ပိုကောင်းမယ်ဟုတွေးကာ ဖီလင် ပိုတက်နေပြန်သည်။ ကြောက်စိတ် နာကျင် မှု..ဖင်ခေါင်းထဲမှအရသာတို့က ယှဉ်တွဲ၍..စည်းစိမ် အပြည့် ရနေသည်။ ““ ဘယ်နဲ့လည်း ငယ်ငယ် နင့်ဖင်ကိုငါတက်လိုးနေတာ ခံလို့ကောင်းတယ် မဟုတ်လား..နင့်လိုကောင် မမျိုးက ဒီလိုဖင်လိုးပေးမှကြိုက်တာမဟုတ်လား ”” ခင်ထားငယ်က ဘာမှပြန်မပြောပေ ကုတင်ပေါ်ဝယ်ပြားပြားမှောက်ထားကာ ဖင်ကြီးကို အစွမ်းကုန် ထောင်ထားကာ ဦးစောမိုး၏ဖင်လိုးမှုကိုခံနေသည် ထောင်ထားသော ဖင်ကြီးကိုလည်း ဦးစောမိုးလီးကြီး အားရပါးရ အရှိန် နှင့်ဝင်လာတိုင်း ပြန်ကော့၍အာခံနေသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ် လိုက်သဖြင့် လီးအရင်းနှင့် တင်ပုဆုံတို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိမိကာ တဘုတ်ဘုတ်အသံထွက်သလို အားရလှသည်။ ခင်ထားငယ်၏ဖင်က လိုး၍ကောင်းလှသည်မို့ ဦးစောမိုးသည် အငမ်းမရပင်ဖြစ်နေသည်။
တအားကိုဆောင့် လိုးနေသည် သူ၏ဂွေးဥကြီးများကလည်းခင်ထားငယ်၏စောက်ဖုတ်ကို တစ်ချီတစ်ချီ လာရိုက်မိသည်။ လိုးကောင်း ကောင်းနှင့်မီးကုန်ရမ်းကုန်ဆောင့်လိုးနေရာ ခဏမှာပင် လရေတွေ ပန်းထွက်လုဖြစ်လာသည်။ လရေပန်းထုတ်တော့ မည်မို့ဆောင့်ချက် လိုးချက်တွေက အရမ်းကို ပြင်းထန်ကာ လီးတန်ကြီးမှာလည်း သံချောင်းတစ်ချောင်းလို မာတင်း လာသည် ။ ဆောင့် လိုးချက် တွေကပြင်းထန် မြန်ဆန်လွန်းသောကြောင့် ဖင်လိုးခံနေသော ခင်ထားငယ်မှာ လီးတန် ကြီးသည်ဖင်ခေါင်းထဲသို့ ၀င်လာသလား ထွက်သွားသလားမသိနိုင်အောင်ပင် ဖင်ဇိမ်တွေ့နေသည်။ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်းနှင့် စောက်ဖုတ်ကိုလိုးတာကိုခံရတာထက် ဖင်လိုးတာကိုခံရတာ ပိုကြိုက်နေ သည်။ စောက်ဖုတ်ကလည်း အလိုးမခံရသောကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ စောက်ရေတွေကို တလကြမ်း ပန်းထုတ် နေသည်။ မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် ဖင်ထောင်ကာအလိုးခံနေသောကြောင့် စောက်ဖုတ် ထဲမှ ထွက်လာသော စောက်ဖုတ်ရေများက အဖုတ်အောက်တည့်တည့် မွေ့ယာပေါ်သို့ တလကြမ်း ထွက်ကျ ကုန်သည်။ ခင်ထားငယ်သည် ယောက်ျားလီး၏သဘောကို နားလည်နေပြီဖြစ်ရာ လရေတွေ ပန်းထွက်လာမှသာ လိုးနေ သူယောက်ျားမှာ အားရကျေနပ်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိမှာလည်း ထိုအချိန်သည် အလိုးခံရခြင်း၏ ကျေနပ်အားရမှုအမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘယ်လိုမှပင် ညင်းဆန် ရုန်းကန်မနေတော့ဘဲ ဦးစောမိုး၏ လရေများ ပန်းထွက် လာစေရန်သာ ဖင်ကြီးကိုထောင်ကာ ကော့ပေးခြင်း ဖင်ခေါင်းထဲမှကြွက်သားများဖြင့် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်အားရပါးရလိုးနေ သောလီးကို ညှစ်ပေးညှပ်ပေး လုပ်နေလိုက်သည်။
ဖင်ကြီးကိုကော့ကာရမ်းပေးသည် ပါးစပ်မှလည်း တအင့်အင့်နှင့် အသံများ ထွက်ကာအားပေးနေမိသည်။ ““ အေး..ဒီလိုမှပေါ့ကွ..ဟုတ်ပြီ ဖင်ကြီးကိုကော့ပေးစမ်း ..နာနာလေးကော့ ..ကောင်းလိုက်တာ နင့်ဖင်လိုးရတာ ဘယ်လိုကောင်းမှမသိတော့ဘူး ငယ်ငယ်ရယ် နင်ရောဖင်လိုးခံရတာ ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား ”” ““ပြောလေကွာ..”” ““ အား..ကောင်းပါတယ်ရှင့် လိုးပါ..လိုးပါ နာနာဆောင့်ပါ အန်ကယ်ရယ် ..ကောင်း လိုက်တာရှင် ဖင်ထဲမှာဘယ်လိုအရသာရှိမှန်းမသိအောင်ပါဘဲရှင် ””ခင်ထားငယ်သည်နာကျင်မှုပြွန်းသော ဖင်လိုးမှုကိုအရမ်းပင်နှစ်ချိုက်လာသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့် ခင်ထားငယ်သည် ဖင်ဆုံကြီးကို အပြတ်ကော့ကော့ပေးသည် ဝေ့၀ိုက်ခါရမ်းပေးသည် ဒါတင်မက စေါက်ဖုတ်ကို လာလာပုတ်သောလီးဥကြီးများကိုလည်းလက်နှင့်ကိုင်တွယ်ကာ ပွတ်သပ်ပေးနေသည် ဦးစောမိုး၏လီးအကုန်မ၀င်မှာကိုစိုးရိမ်နေသေးသည်။ ခင်ထားငယ်တစ်ယောက် မိမိ၏ဖင်လိုးမှုကို အားရပါးရတုန့်ပြန်နေသဖြင့် ဦးစောမိုးသည် သိတ်ကို အားရကာ တဏှာစိတ်လည်းအပြင်းအထန်ဆုံးအချိန်သို့ရောက်ရှိလာသည်။
သည်ကြားထဲ လဥနှစ်လုံးကိုပါ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ် ခြင်းခံရသဖြင့် ဘယ်လိုမှပင်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ပါးစပ်မှ ““ ငယ်ငယ်ရေ..ငါတော့ နင့်ဖင်ထဲကိုလရေတွေ ပန်းထည့်လိုက်တော့မယ်နော် ”” ခင်ထားငယ်ကအားမရသေးသဖြင့် ““ မပန်းပါနဲ့ဦး..လိုးပါဦး နာနာလေးလိုးပါ ဦး ..ကောင်းလွန်းလို့ပါ.အောင်မယ်လေးကောင်းလိုက်တာနော်..”” ““ မရတော့ဘူး လာပြီ..လာပြီ..အား..အားးးးးး”” ဦးစောမ်ိုးသည် ပါးစပ်မှရေရွတ်မြည်တမ်းရင်း ခင်ထားငယ်၏ ဖင်ခေါင်းထည်းသို့လီးကို အချက် နှစ်ဆယ်ခန့် အားရပါးရဆောင့်လိုးပြစ်လိုက်ရင်း လရေတွေကို ပန်းထုတ်လိုက်သည် ခင်ထားငယ်မှလည်းဆောင့်ချက်က ပြင်းထန်လွန်း၍ ခေါင်းပင်ထောင်လာသည် ဦးစောမိုးက ပြောလည်းပြောဆောင့်လည်းဆောင့် ပန်းလည်းပန်း ပြုလုပ် လိုက်ရာ ခင်ထားငယ်၏ ဖင်ခေါင်းထဲဝယ် ““ ပူု”” ကနဲဖြစ်ကာ အရမ်းကိုဇိမ်ကျသွားသည် ဖင်လိုးခံရသော်လည်း စောက်ဖုတ် အလိုးခံရဘိ သကဲ့သို့ပင် ကောင်းလှသည်။ လရေများပန်းထုတ်ပြီးနောက် လီးကြီးက တဖြေးဖြေးပျော့ကျသွားသည်ကို ခင်ထားငယ် သိနေ သည် ဦးစောမိုး၏လီး ဖင်ထဲမှထွက်သွားသည် ဦးစောမိုးလည်း ခင်ထားငယ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားသည်။ ခင်ထားငယ်ခမျာမှာသာ ကုတင် ပေါ်ဝယ်မှောက်ရက်သားလေးကျန်ရစ်သည် နောက်တစ်ကြိမ်များ ထပ်လိုးမလားဟုစောင့်နေလိုက်သေးသည် သို့သော် ဦးစောမိုးက အခန်းထဲမှထွက်သွားပြီဖြစ်သည်..ခင်ထားငယ်ကတော့ အားမရသေး ခံလို့မ၀သေး ..